Qilee Ashalamoo, fi Ashuutee!? Bishooftuu, Ashalamoo 2ffaa?? | Fighting for Freedom and Equality
Qilee Ashalamoo, fi Ashuutee!? Bishooftuu, Ashalamoo 2ffaa??
Posted by Gishe Abdi Wako on October 5, 2016
Oromiyaa naannoo Arsii yoo nama abaaran, keessattuu yoo ijoollee abaaran, darbee darbee jechuu dha, Qileen Ashalamoo ta ilmaan aayyaa nyaatte sun si haa nyaattu jedhu. Yookin Qilee Ashuutee lixi ati jedhu.
Qileen Ashalamoo maali? Ashalamoon maqaa qileeti. Ashuute jechuun gadi fagoo jechuu dha. Lamaanuu qilee gadi fagooti. Lamaan keessaa Ashalamo qilee seenaa qabduu dha. Ashalamo naannoo Arsii Nageellee Hora Laangannoo cinatti argamti.
Zamana Haile Selassie Oromoon Arsii Amaaraan wal lolaa ture. Hangamis Haile Sellaien caasaa mootummaa diriirfatuu danda’us ummanni Oromoo Arsii harka hin kennanneen ture. Hanga dhumaatti Amaaraan wal waraanaa ture. Akkuma aadaa Oromootti Arsiin gaafa lolaa warra humna hin qabne, daa’imman, ijoollee, fi beera bakka itti dhokfatan qabaniin ture. Bakkeewwan dhoksaa keessaa qileen Ashalamoo tokko turte.
Bara 1936, bara Haile Selassie’n Xaaliyaanii jalaa baqatee biyya England galu sana Amaarri (Wattaaddarri Haile Selassie) biyya Oromoo irraa gara Finfinneetti waamamanii turan. Oromoon Arsii karaa irratti eegaa waraana itti banaa ture. Amaarri akka tasaa karaa loltoonni Oromoo eeganiin dhiiftee osoo deemtuu ijoollee, beeraa fi dadhaboo Oromoo itti dhokfaman kanatti dhufte. Baayi’inni ijoollee dha. Laakkofsi namoota kanneenii dhibbootaan kan laakkayamu ture. Namni yeroo sanitti beekkamaa ture Gooftaa Bulloo jedhamu qofti ijoollee 40 achitti dhokfatee ture. Amaarri ijoollee kanatti dhufte hunda isaaniituu muxux gootee fixxe. Horri/Harri Laanganoo dhiigaa uffatee halluu jijjiiree diimaa ta’e. Lafeen ilmaan namaa kun hanga har’aas ni mul’ata jedhamee himama. Kanaaf, hanga ammaatti sammuu Oromootaa keessaa hin badn’e.
Qileen biraa ta ilmaan Aayyaa itti dhumte mataa gubaa Arsii Nageellee naannoo Leephis jedhamtu dha. Tana sirritti qulqulleeffadhu malee irraa hin dubbadhu.
Ashalamoon lammaffaan qilee kaleessa Tigreen itti nu fixxe ta’ee argame. Bishooftuu!! Jaarraa 21ffaa keessatti wanti jaarraa 20ffaa keessa ta’e bifa jijjiiree kaleessa dirree Oromoon nagaya, jaalala, kabajaa, itti labsu qilee awwaala keenyaa ta’ee dhiigaan booraye. Qileetti nu darbanii nu fixan. Gubbaa irraa ummata nagayaatti keemikaala roobsan. Jalaan xiyyiitiin nu akaawan. Reeffa akka hin soqannes biyyee itti dachaasan. Warra ajjeefate booyicha dhoorgan. Firri firaaf booyee akka hin geggeessine dhoorgan.
Dubbiin hin baay’atin mee. Ashalamoon Sadaffaa (3ffaa) osoo nutti hin deebine diina keenya qotnee Ashuutetti awwaaluu qabna!!
← Asafa Jalata THE GENOCIDAL MASSACRES OF OROMOS AT THE IRREECHAA FESTIVAL: THE LIES OF THE TIGRE-LED ETHIOPIAN GOVERNMENT
OROMIA (Ibsa ABO) Qabsoo Bilisummaa Oromoo Rarraga Bilisummaa Dhaqqabee Jiru Xumura Itti Gochuun Dirqama Oromoo Maraa Ti →